UWoldrow Wilson uMongameli we-28 we-United States
Ubuntwabuntwana beMfundo kunye neMfundo kaWolrow Wilson:
Wazalelwa ngoDisemba 28, 1856 eStunton, eVirginia, uThomas Woodrow uWilson kungekudala wathuthela eAugusta, eGeorgia. Wafundiswa ekhaya. Ngowe-1873, waya kwi-Davidson College kodwa kungekudala waphuma ngenxa yemicimbi yezempilo. Wangena kwiKholeji yaseNew Jersey ebizwa ngokuba yiPrinceton ngo-1875. Waphumelela ngo-1879. Wilson wafunda umthetho waza wangeniswa kwibhar ngo-1882.
Ngokukhawuleza wagqiba ekubeni abuyele esikolweni aze abe ngutitshala. Wafumana i Ph.D. kwiNzululwazi yezopolitiko kwiYunivesithi yaseYohn Hopkins.
UWilson wayengunyana kaJoseph Ruggles Wilson, uMphathiswa wePresbyterian, noJanet "Jessie" uWoldrow Wilson. Wayeneentombi ezimbini kunye nomzalwana omnye. NgoJuni 23, 1885, uWilson watshata no-Ellen Louis Axson, intombi yomfundisi wePresbyterian. Wafa kwiNdlu ye-White House ngoxa uWilson wayengumongameli ngo-Agasti 6, ngo-1914. NgoDisemba 18, 1915, uWilson wayeza kutshata kwakhona no- Edith Bolling Galt ekhayeni lakhe ngoxa wayesengumongameli. UWilson wayenentombi ezintathu ngomtshato wakhe wokuqala: UMargaret Woodrow Wilson, uJessie Woodrow Wilson kunye no-Eleanor Randolph Wilson.
Umsebenzi kaWoldrow Wilson Ngaphambi koMongameli:
UWilson wakhonza njengoprofesa kwiKholeji yaseBryn Mawr ukususela ngo-1885-88 waza wenguprofesa wembali kwiYunivesithi yaseWesley evela ngo-1888-90. Emva koko waba nguprofesa woqoqosho lwezopolitiko ePrinceton.
Ngomnyaka we-1902, wamiselwa nguMongameli we-University of Princeton ukukhonza kude kube ngo-1910. Emva koko ngo-1911, uWilson wakhethwa njengeGavana waseNew Jersey. Wayekhonza kude kube ngo-1913 xa waba ngumongameli.
Ukuba nguMongameli - 1912:
UWilson wayenqwenela ukutyunjwa ukuba abe ngumongameli kunye nokukhankanya ukutyunjwa.
Utyunjwe yiDemocratic Party kunye noTomas Marshall njengengumongameli wakhe. Wayephikisana nje noMongameli u- William Taft owayengumongameli kodwa kunye no- Bull Moose umviwa u- Theodore Roosevelt . IQela leRiphabliki lihlukaniswe phakathi kweTaft neRoosevelt okubhekiselele ukuba uWilson wancinqa kalula uongameli kunye nama-42% evoti. URovelvelt ufumene i-27% kunye neTaft kwaye wafumana i-23%.
UWilson wabizwa ukuba asebenzele uongameli ngo-1916 kwi-voti yokuqala kunye noMarshall njengeVice-ngameli wakhe. Wayechaswa yiRepublican Charles Evans Hughes. Ngethuba lonyulo, iYurophu yayimfazwe. Iidemokhrasi zasetyenziselwa isiqubulo esithi, "Wasisindisa kwimfazwe," njengoko bekhankanya uWilson. Kwakukho inkxaso eninzi, nangona kunjalo, kumchasi wakhe kwaye uWilson wanqoba ukhetho olufutshane kunye nama-277 kuma-534 amavoti okhetho.
Iziganeko kunye neempumelelo zikaMongameli weWolrow Wilson:
Esinye seziganeko zokuqala zikaMongameli weWilson yayingumhlathi we-Underwood Tariff. Oku kunciphisa ixabiso lentlawulo ukusuka kwi-41 ukuya kuma-27%. Kwakhona kwakha irhafu yokuqala yerhafu emva komhlathi we-16 uhlengahlengiso.
Ngomnyaka we-1913, uMthetho we-Federal Reserve wenza i-Federal Reserve inkqubo ekuncedeni ukujongana nokuphakama kwezoqoqosho kunye nokwehla.
Yanikezela iibhanki ngemali-mboleko kwaye yancedisa ukujikeleza kwamashishini.
Ngo-1914, uMthetho we-Clayton Anti-Trust wanyuswa ukuba uncede abasebenzi basebenamalungelo amaninzi. Yavumela izixhobo ezibalulekileyo zabasebenzi njengezibetha, iipotethi kunye ne-boycotts.
Ngeli xesha, iinguqulelo zenzeka eMexico. Ngo-1914, uVinustiano Carranza wathatha urhulumente waseMexico. Nangona kunjalo, iPancho Villa yayinommandla omkhulu waseMexico. Xa i-Villa iwela eMelika ngo-1916 yabulala ama-17 aseMelika, uWilson wathumela ama-6 000 amabutho phantsi kweGeneral John Pershing kuloo ndawo. U-Pershing wagxotha i-Villa ukuya eMexico ihlasele uhulumeni waseMexico noCarranza.
IMfazwe Yehlabathi I yaqala ngo-1914 xa uArchduke uFrancis Ferdinand wabulawa ngumntu waseSerbia. Ngenxa yezivumelwano ezenziwe phakathi kweentlanga zaseYurophu, abaninzi baye bajoyina imfazwe. Amandla amakhulu : IJamani, i-Austria-Hungary, iTurkey, neBulgaria balwa namaLungu aBellies: iBrithani, iFransi, iRashiya, iItali, iJapan, iPortugal, iChina neGrisi.
IMelika yayingathathi hlangothi ekuqaleni kodwa ekugqibeleni yangena kwimfazwe ngo-1917 kwicala lamanyano. Izizathu ezibini zokungqubuzana kwe-ship yaseBrithani yaseLusitania eyabulala ama-120 aseMelika kunye neTimmerman yiletagram eyayibonisa ukuba iJamani izama ukufumana isivumelwano kunye neMexico ukuba isebenzisane ukuba i-US ingene kwimfazwe. I-Merika yangenela imfazwe ngo-Ephreli 6, 1917.
I-Pershing iholele imikhosi yaseMerika ekulweni ekuncedeni ukunqoba iCentral Power. I-armistice yasayinwa ngoNovemba 11, 1918. ISivumelwano saseVersailles sisayina ngo-1919 sasitsho imfazwe eJamani kwaye yafuna ukubuyiswa okukhulu. Kwakhona kwadala i-League of Nations. Ekugqibeleni, i-Senate ayayiyi kuvumelanisa umnqophiso kwaye ayize ijoyine i-League.
Ngo-1921, uWilson washiya umhlala-phantsi eWashington, DC wayegula kakhulu. Ngomhla kaFebruwari 3, 1924, wafa ngenxa yeengxaki ezivela kwintlungu.
UWoldrow Wilson wadlala indima enkulu ekuqaliseni ukuba kwaye xa iMelika yayiza kubandakanyeka kwiMfazwe Yehlabathi I. Wayeyintliziyo yedwa owazama ukugcina iMelika imfazwe. Nangona kunjalo, kunye neLusitania, ukuxhatshazwa okuqhubekayo kweempahla zaseMerika ngamajelo aseJamani, kunye nokukhululwa kwe- Zimmerman Telegram , iMelika ayiyi kubanjwa. UWilson walwa noMbutho weZizwe ukuze ancede aphendule enye iMfazwe Yehlabathi eyamnqoba ngomvuzo weNobel woxolo ka -1919.
Iingcebiso ezi-13 zokunqoba i-College Collegemen yakho
Ukuhlaziywa kwe-Album: Waylon Jennings & I-Waymore Blues Band - Ungatsho Ukufa
Indlela yokudibanisa "i-Fournir" (ukuThengisa, ukuNika) ngesiFrentshi
Uqwalaselo lweNkqubo yokuThengiswa kweDoD